Sidee 24 miisaanka wejiga madaxiisa loogu miisaamo 4 xitaa 6 nooc oo alaabooyin ah?
Ma jeceshahay cunista miro isku dhafan, miraha qallalan iyo cunto fudud, xitaa waxaa jira cunto diyaarsan oo isku dhafan. Isku darka waa kuleyl oo caan ayey ku yihiin dhalinyarada. Shuruudaha suuqa si deg deg ah ayaa kor loogu qaaday, soo saarayaasha cuntada fudud waxay raadinayaan mashiinka wax lagu baakadeeyo oo si otomaatig ah hoos ugu dhigaya ...
Sidee loo doortaa muunad miisaanka wejiga badan?
Qiimaha sare ee shaqaalaha, shuruudaha xawaaraha sare, warshadda cuntada ee aad iyo aad u badan ayaa dooran doonta miisaan culus oo badan si loo gaaro miisaanka baabuurta. Laakiin miyaad taqaanaa sida loo doorto nooca saxda ah ee miisaanka wejiga badan ee cuntada loogu talagalay? Waxaa jira saddex arrimood oo warshadda cuntada ay u baahan tahay inay tixgeliso? Baahida loo qabo 1.Speed